မဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့် (778571-57-6) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / Nootropics အမှုန့် / မဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့်
rating: SKU: 778571-57-6. အမျိုးအစား: Nootropics အမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ, မဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့် (778571-57-6) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
မဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့် အထူးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် 300 enzymatic လုပ်ရပ်တွေကိုကျော်ထဲမှာဓာတ်သတ္တုရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုပေးထားနှောက်ယှက်သောခေတ်သစ်အနောက်တိုင်းကမ္ဘာအတွက်အကြီးမားဆုံးသောချို့တဲ့, တစ်ခုဖြစ်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ် threonate မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်အထူးသဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာမဂ္ဂနီဆီယမ်အဆင့်ဆင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးတို့အတွက်အရှိဆုံး bioavailable ပုံစံများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်းမဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: မဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 648-651 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်မှုကို Temp: RM
ဦးနှောက် function ကိုများနှင့်တစ်ဦးအပိုထပ်တိုးတိုးမြှင့်အတွက်ကုန်ကြမ်းမဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့်
ကုန်ကြမ်းမဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့်အသုံးပြုမှု
သင့်လျော်သောမဂ္ဂနီဆီယမ် threonate သောက်သုံးသောကို elemental မဂ္ဂနီဆီယမ်တစ်အများကြီးနိမ့်ပမာဏကိုလိုက်လျောနိုင်ရန်အတွက် 1-2 ဂရမ်န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ပတ်လည် 200 မှအများစုကသက်သေအထောက်အထားအချက်များကိုနေ့စဉ်ကို elemental မဂ္ဂနီဆီယမ်၏ mg နှင့် threonate ကိုအကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကုန်ကြမ်းမဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
မဂ္ဂနီဆီယမ်၏အူစုပ်ယူခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လောက်မဂ္ဂနီဆီယမ်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်, ဒါဖြည့်စွက်နဲ့ဆက်စပ်အလွန်များစွာသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိနေကြသည်မဟုတ်။ အလွန်အကျွံမဂ္ဂနီဆီယမ်လည်းမရှိလြှငျ, ခန္ဓာကိုယ်သာလိုအပ်ပါတယ်သလောက်စုပ်ယူပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အလွန်အကျွံဆေးများအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့် diarrhea.There မျှဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအစီရင်ခံခဲ့ကြဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
သုတေသီများမဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာဟာရ၏လယ်ပြင်ပြောင်းလဲလူတိုင်းဘဝမှာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအဆင့်မှာအကောင်းဆုံးသိမြင် function ကိုအောင်မြင်ရန်ထိန်းသိမ်းနည်းကိုကူညီနိုင်မယ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်စရာ, MIT ကမှာသုတေသီများမဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့်သင့်ဦးနှောက်ကိုစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်မဂ္ဂနီဆီယမ်ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ဖို့တတ်နိုင်ကြောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သုတေသီများမဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့်တိုတောင်းသောသက်တမ်းနှင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်နှစ်မျိုးလုံးတိုးတက်မှတ်ချက်ချမသာ, ကြောင်း
2010 အတွက်ဂုဏ်သတင်းဂျာနယ်တွင် neuron ထုတ်ဝေပဏာမသုတေသနအတွက်, MIT မှသုတေသီတွေကဖြည့်စွက်မဂ္ဂနီဆီယမ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရရှိနိုင်ပါသည်ပုံစံပြခြင်းနှင့်မဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့်နှင့်သာမဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate ဦးနှောက်သို့ဖြတ်ကျော်နိုင်စွမ်းအမှုန့်-ရှိကြောင်းတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်သရုပ်ပြ နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်။ သူတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့ဦးနှောက်ကိုမဂ္ဂနီဆီယမ်ပြင်းအား၌ဤတိုး key ကိုသိမြင်မှုအစီအမံတှငျတှေ့အကြိုးကြေးဇူးမြားခဲ့သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် Threonate အကျိုးကျေးဇူးများ
မဂ္ဂနီဆီယမ် threonate ၏အစောပိုင်းသုတေသနပြု UCLA မှာသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပေမယ့်လေ့လာမှုအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်များအလငျး၌ proliferated ပါပြီ။ မဂ္ဂနီဆီယမ် threonate တစ်ခုမှာအဓိကအကျိုးကျေးဇူးလုံးဝနီးပါး unbioavailable ဖြစ်ကြောင်းတချို့အပါအဝင်မဂ္ဂနီဆီယမ်၏ထက်ဝက်တစ်ဒါဇင်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် absorption.Given အဘို့ဖြစ်၏, ဒီရှားပါးခြင်းနှင့်အသုံးဝင်သောဝိသေသဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါမဂ္ဂနီဆီယမ်အသှေးကို-ဦးနှောက်အတားအဆီးဖြတ်ကျော်ထားပါတယ်ပြီးတာနဲ့သူကရှည်လျားပြီးနှစ်ဦးစလုံးရေတိုအသုံးအနှုန်းများအတွက်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးတိုးမြှင့်လုပ်ကိုင်ဖို့တတ်၏။ မဂ္ဂနီဆီယမ်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်အမှတ်တရများဖွဲ့စည်း, ဒါပေမယ့်လည်းအသက်ကြီးသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းမသာအတွက် Synaptic လမ်းကြောင်း (ဦးနှောက်ထဲမှာဆက်သွယ်မှု), တွင်းထွက်အကူအညီအထောက်အပံ့များကိုအရှိန်မြှင့်အင်ဇိုင်းတွေနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်သည် ဖြစ်. ။
မဂ္ဂနီဆီယမ် threonate ၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးပိုကောင်းအိပ်စက်ခြင်းရဲ့အရည်အသွေးပါပဲ။ Pharmacopsychiatry ၏ဂျာနယ်ထဲမှာ 2002 လေ့လာမှုအရ, မဂ္ဂနီဆီယမ် threonate အချို့ receptors နှင့် GABAergic နှင့် glutamatergic ဟုခေါ်တွင်ဂီယာ modulates ။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အိပ်ပျော်အရည်အသွေးကိုကူညီခဲ့မဂ္ဂနီဆီယမ် threonate ရှာတွေ့ဖို့ဦးနှောက်အပေါ် EEG စမ်းသပ်မှုမှတဆင့်တိုင်းတာ။
တူညီသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, မဂ္ဂနီဆီယမ် threonate လောင်သူကိုလူအတော်များများလည်းလျော့နည်းအလေးပေးနှင့်မဟုတ်ရင်ထက်လျော့နည်းစိုးရိမ်ခံစားရတယ်။
မဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate ကုန်ကြမ်း Powder
မဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ထံမှမဂ္ဂနီစီယမ်, L-threonate အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို